နှစ်တွေအများကြီး ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲခဲ့တဲ့ MRTV-4 မင်းသားလေး လင်းမြတ်……. – Cele Oscar
နှစ်တွေအများကြီး ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲခဲ့တဲ့ MRTV-4 မင်းသားလေး လင်းမြတ်…….
March 6, 2022 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီးရေ MRTV-4 ကနထေုတျလှငျ့ ပွသတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှေ မှ တဈဆငျ့ လူသိမြားနာမညျကွီးလာခဲ့တဲ့ မငျးသား လငျးမွတျ ကိုတော့ အားလုံးပဲသိကွမယျထငျပါတယျ။ မငျးသား လငျးမွတျ ဟာ မကွေးစညျ ဇာတျလမျးတှဲမှာ ပါဝငျ သရုပျဆောငျ ထားပါသေးတယျ‌နျော။
မငျးသား လငျးမွတျ ဟာ ခဈြသူနဲ့ ရှလေကျတှဲသှားပွီလို့ ခဈြတဲ့ပရိသတျကို အသိပေးလိုကျပါတယျ။ ကနြျောတို့ နှဈယောကျ ရဲ့ မင်ျဂလာလကျမှတျထိုးပှဲလေးကို အခွအေနအေခြိနျ အခါအရကော ၊ ရောဂါအခွအေနတှေေ အရကော အမွနျစီစဉျလိုကျရတဲ့ အတှကျ နီးစပျရာနှဈဖကျဆှမြေိုးမြားနှငျ့
အိမျနီးခငျြး မိတျဆှမြေားဖွငျ့သာ အကဉျြးရုံးပွု လုပျခဲ့ရတဲ့အတှကျ မဖိတျဖွဈလိုကျတဲ့ မဖိတျလိုကျ ရတဲ့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြား၊ကို အနူးညှတျတောငျးပနျပါတယျခငျဗြာ။ We marry after 9years 11months & 21days ❤️ Total of 3640days which is 87360hrs and 5241600 in minutes together” လို့ သူ့ရဲ့လူမူ့ကှနျယကျပျေါမှာ ရေးသားထားပါတယျ။ ကဲ …ပရိသတျကွီးအတှကျ သရုပျဆောငျ လငျးမွတျ တို့ ရဲ့ မင်ျဂလာလကျမှတျ ထိုးပှဲလေးက ဓာတျပုံလေးတှကေို မြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျ။
crd : cele only
ပရိသတ်ကြီးရေ MRTV-4 ကနေထုတ်လွှင့် ပြသတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မှ တစ်ဆင့် လူသိများနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ မင်းသား လင်းမြတ် ကိုတော့ အားလုံးပဲသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မင်းသား လင်းမြတ် ဟာ မကြေးစည် ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားပါသေးတယ်‌နော်။
မင်းသား လင်းမြတ် ဟာ ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားပြီလို့ ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကို အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးပွဲလေးကို အခြေအနေအချိန် အခါအရကော ၊ ရောဂါအခြေအနေတွေ အရကော အမြန်စီစဉ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် နီးစပ်ရာနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများနှင့်
အိမ်နီးချင်း မိတ်ဆွေများဖြင့်သာ အကျဉ်းရုံးပြု လုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် မဖိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ မဖိတ်လိုက် ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ၊ကို အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ We marry after 9years 11months & 21days ❤️ Total of 3640days which is 87360hrs and 5241600 in minutes together” လို့ သူ့ရဲ့လူမူ့ကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ကဲ …ပရိသတ်ကြီးအတွက် သရုပ်ဆောင် လင်းမြတ် တို့ ရဲ့ မင်္ဂလာလက်မှတ် ထိုးပွဲလေးက ဓာတ်ပုံလေးတွေကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေလတ်တလော ခံစားနေရတဲ့ မီးပျက်တဲ့ ဒါဏ်ကို ကူညီဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ သည်ခေါတ်နေ……
အမြဲတမ်းနောက်ကျတတ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးကို ကျော်ကျော်က ဘယ်လိုဆေးထိုးလိုက်သလဲ?…….